आर्थिक संकटमा क्रिकेट रंगशाला, धुर्मुस भन्छन् – ‘हिम्मत हारेको छैन’, रंगशालामा अपिल त्रिपाठी (भिडियो) — falanonews.com
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको अगुवाईमा चितवनमा निर्माणाधिन गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आर्थिक संकटमा परेको छ । नागरीक स्तरबाट निर्माण भरहेको रंगशालाको लागि हालसम्म करिब ३१ करोड रकम संकलन हुँदा ४२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ । यसरी आजको दिनमा नै परियोजनाको ऋण १० करोड बढी छ, जबकी परियोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब बढी रकमको आवश्यकता पर्छ ।
संकट परेतापनि आफुले हिम्मत नहारेको अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले बताएका छन् । गण्डकी टेलिभिजनको कार्यक्रम गण्डकी छड्केको यो हप्ताको श्रृखला निर्माणाधिन रंगशालाबाट तयार पारिएको छ । कार्यक्रममा सितारामको अन्तरवार्ता सहित रंगशाला निर्माणका अनेक आयामबारे स्थलगत रिपोटीङ गरीएको छ ।
गण्डकी छड्केको यही श्रृखलामा सरकारको सिचाई परीयोजना बाट ३० बर्ष देखी पिडित बनेका जनताको बिषय पनी उठान गरिएको छ । गण्डकी टेलिभिजनमा शुक्रबार प्रसारीत कार्यक्रमको पुरा श्रृखला तलको भिडियोमा हेर्नुहोस् !
फेवातालमा छड्के ! क्षेत्रफल लफडाको चुरो कुरो (भिडियो सहित)